Ndiani akapa zvakanyanya kuLinux 5.10 kernel? Vagadziri | Linux Vakapindwa muropa
Ndiani akapa zvakanyanya kuLinux 5.10 kernel?
Iwe unofanirwa kunge uchitozviziva izvo Linux haisi kernel yakagadzirwa nekambani, sezvazvingaitwe nemamwe masisitimu anoshanda ehuridzi. Kunyangwe Linus Torvalds haapi mutsamba yakawanda mazuva ano, asi iye akazvipira ku "manejimendi" purojekiti yake vamwe vari mukutarisira kupa zvigamba uye zvese zvitsva zvinowedzerwa kune kernel.
Sezvaunenge uchitoziva, zvinoenderana neshanduro, iyo vatsigiri vakuru kodhi inogona kuchinjika. Semuenzaniso, paive nenguva apo Microsoft yaive pakati peavo vakapa kodhi yakanyanya, pane dzimwe nguva anga ari mamwe makambani anga ari iwo akakwirira zvinzvimbo munzvimbo yemupiro panguva yekuvandudzwa kweLinux.
Munyaya ye Linux 5.10, uye nekuda nhamba dzakapihwa neLWN.net, zvave zvichikwanisika kusimbisa kuti ndiani ave achikwanisa kupa zvakawanda kune iyi vhezheni yekernel. Linus Torvalds paakaburitsa iyi vhezheni yekupedzisira muna Zvita 13, kuongororwa kweyakajairika-masvondo masere ekuvandudza kutenderera kwakaitwa, uye panguva iyoyo pakange paine zviuru zveshanduko kukodhi yekodhi.
Kunze kwekucherechedza kuwanda kwevatsigiri pakati peavo vakapa nhoroondo zhinji, zvinotifadza pano ndeavo makambani vanga vachiwedzera imwe kodhi kune kernel. Izvi hazvikonzerwe nekuwedzera kufarira muLinux, asi kune yekuisa mutyairi kana imwe shanduko inodiwa kune zvido zvekambani. Semuenzaniso, iyo spike mukubatana kweMicrosoft muzuva rayo yaive nekuda kwekubatanidzwa kweHyper-V rutsigiro ...
Kana ikaongororwa neshanduko seti, Huawei uye Intel vanga vari ivo vanonyanya kushandira mune iyi vhezheni Linux 5.10. Ivo vakateverwa neRed Hat, Google, AMD, nezvimwe. Kune rimwe divi, tichifunga huwandu hwemitsara yakachinja, aya mamwe makambani anoenderera mberi nekutonga, achingoisa mari chete, nevabatsiri vakuru vari Intel neHuawei. Pano iwe unogona kuona iyo yakazara tafura:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kernel » Ndiani akapa zvakanyanya kuLinux 5.10 kernel?
WINE 6.0-rc6 inosvika neinenge zvigadziriso zvazvino
Epic Mitambo inowana Rad Game Zvishandiso